SEO ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ Search Engine Optimization 101 - Semalt အကြံပေးချက်
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှတဆင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများပိုမိုဆွဲဆောင်လိုသလား။ ထို့နောက် Search Engine Optimization ဟုခေါ်သောသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အထိရောက်ဆုံးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောအွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အွန်လိုင်းစျေးကွက်မဟာဗျူဟာ၏အစဖြစ်သည်၊ မြင့်မားသောရာထူးနေရာသည်တစ်နေ့လျှင် ens ည့်သည်များသောင်းနှင့်ချီသောသူများကိုလျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုဖြင့်ကောင်းမွန်သောရာထူးတစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံမစိုက်ပါ။ ရှာဖွေရေးဝေါဟာရ (၁) တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သာမက synonyms များကိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ SEO ဆိုသည်မှာအရေးကြီးသောအချက်မှာ၎င်းသည်ရေရှည်အတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ယခုရောက်ရှိနေသည့်ရာထူးများသည်အနာဂတ်တွင်အကျိုးကျေးဇူးများဆက်လက်ရရှိလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းလည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း visitors ည့်သည်များအပေါ်မှီခိုသောကုမ္ပဏီများသည် SEO ကိုသုံးကြသည်။ သူတို့သည်သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများမှအသွားအလာခံလိုကြသည်။ SEO ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ မည်သည့်နေရာတွင်စတင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတိအကျပြောပါမည်။
၀ က်ဘ်ဆိုက် visitors ည့်သည်များကိုပိုမိုပစ်မှတ်ထားသောဤ SEO ဆောင်းပါးတွင်သင်၏စီးပွားရေးကိုအော်ဂဲနစ်အသွားအလာပိုမိုရရှိစေရန်ကူညီနိုင်သည့်အရေးကြီးသောအရာများကိုအာရုံစိုက်ပါမည်။
SEO နှင့် SEA အကြားခြားနားချက်
SEO အပြင်သင်သည် SEA နှင့် SEM ကိုပင်တွေ့ဖူးသည်။ ဤရွေ့ကားသုံးအလွန်ဆင်တူပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားနေတုန်းပဲ။
SEO: ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှု - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုဟာအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်တွေနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်။
ပင်လယ် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကြော်ငြာခြင်း - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှတစ်ဆင့်ကြော်ငြာခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည် Google ရှိငွေပေးချေသောကြော်ငြာမှတဆင့်ထိပ်ဆုံးသို့လည်းရောက်နိုင်သည်။ ကြော်ငြာကို Google AdWords နှင့် Bing Ads မှတဆင့်ပြုလုပ်သည်။
SEM: ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး: SEM သည် SEO နှင့် SEA တို့၏ထီးမတန်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Search Engine Optimization ဆိုတာဘာလဲ။
Search Engine Optimization (သို့) SEO ။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုစာသားအတိုင်းပြန်ဆိုပါက search engine optimization ကိုဆိုလိုသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုစျေးကွက်မြင့်မားသောရာထူးများသို့ရောက်ရှိခြင်းအားဖြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှလာသည့်ယာဉ်ကြောတိုးမြှင့်ခြင်းကိုစျေးကွက်သမားများကအသုံးပြုသည်။ အကောင်းမြင်ခြင်းနှင့်စတင်ရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံးမေးခွန်းအချို့၊ ပြproblemsနာများနှင့်လိုအပ်ချက်များကို ဦး စွာဖော်ထုတ်ရမည်။ သင်၏ဖောက်သည်များသည်မည်သည့်အရာကိုရှာဖွေနေကြသနည်း။ သူတို့ဘယ်မှာလဲ။ စသည်တို့ကိုထိုအခါသင်သည်ဤအဖြေတွေကိုနှင့်အတူစတင်လုပ်ကိုင်ပါ။ ယခုတွင်သင်သည်သင်၏ (အလားအလာရှိသော) ဖောက်သည်များ၏ရှာဖွေမှုရှာဖွေမှုအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်သည်။
သငျသညျနားလညျနိုငျသညျ့အတိုငျး SEO ဆိုသည်မှာသင်၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်ကိုသင်၏ဝဘ်ဆိုက်သို့ရောက်ရှိရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ကဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံ၊ ဘလော့ဂ်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုဝေမျှခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ SEO ၏အားသာချက်မှာအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေသည်။ ရေရှည်ရလဒ်များကိုသာအာရုံစိုက်သည်။
ဂူဂဲလ်လိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အဖြေပေးစက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ သငျသညျရှာဖွေရေးမေးမြန်းမှု/မေးခွန်းတစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့် Google ကအသင့်တော်ဆုံးအဖြေကိုပြလိမ့်မည်။ သို့သော်သက်ဆိုင်ရာအဖြေတစ်ခုရရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ဖြစ်နိုင်သမျှအဖြေများအားလုံးသည် ဦး စွာသိရလိမ့်မည်။
အင်တာနက်ပေါ်မှအများဆိုင်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုစုဆောင်းခြင်းဖြင့်ဂူဂဲလ်ကပြုလုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည် crawlers သုံး၍ စာမျက်နှာများကိုမြေပုံဆွဲလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားစက်ရုပ်များသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာသည့်စာမျက်နှာများကိုညွှန်းရန်။ bot များသည်စာမျက်နှာကိုဖတ်ပြီး Google ၏ algorithm အရ၊ ရှာဖွေမှုနှင့်မည်မျှသက်ဆိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။
ဂူဂဲလ်တွင်မြင့်တက်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီများ၏အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်စျေးကွက်များအတွက်လည်းဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ချင်တယ် သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေသောဖောက်သည်များလက်ခံရန်ပိုမိုရှင်းလင်းလွယ်ကူသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းငါတို့ပျင်းရိပြီးပထမစာမျက်နှာကိုကျော်ကြည့်လို့မရဘူး။ ပထမရလဒ်ပြီးနောက်သင်အရေးမကြီးသောကြောင့်နံပါတ် ၁ နေရာကိုသွားရန်အရေးကြီးသည်။
ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနှင့်သက်ဆိုင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်အရည်အသွေးကောင်းများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ထူးခြားသောအကြောင်းအရာများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည် ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာကစာသားသက်သက်ထက်ပိုပါတယ်။ ဂူဂဲလ်သည်ဂူဂဲလ်မြေပုံများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ သတင်းစသည်တို့ကိုလည်းအသုံးပြုသည်။
သင်ကိုယ်တိုင် SEO ၏ရှုပ်ထွေးမှုများကိုလေ့လာပြီးအကောင်အထည်ဖော်ရန်သွားမည်လား၊ SEO ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကောင်းမွန်သည် နှင့် ကနေလာသည့်ရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်။ သို့သော်သင်သည်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်လည်း၎င်းကိုလေ့လာပြီးသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါသလား။ ၎င်းကိုသွားရန်အမြန်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ SEO သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဂူဂဲလ် Analytical နှင့် Search Console ကဲ့သို့သော tool များအသုံးပြုခြင်းစသည်တို့သည်ကျွမ်းကျင်မှုများစွာလိုအပ်သည်။
SEO သင်တန်းကိုအခြေခံအားအမြန်ဆုံးသင်ကြားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အားလုံးတိုတို, ကျစ်လစ်နှင့်လက်တွေ့ကျတဲ့။ အွန်လိုင်းများစွာရှိသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုသင်လိုက်နာနိုင်သည်၊ သို့သော်ယင်းသည်လက်တွေ့မကျပါ။ SEO ဆိုသည်မှာအလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးရှုပ်ထွေးသည်။ နာရီနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများ၌သင်လိုအပ်သောဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်သင်သည်အွန်လိုင်းသုတေသနပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် SEO ကိုကိုယ်တိုင်သင်ယူနိုင်သည်။ ဤလမ်းကြောင်းသည်အရှည်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း SEO ကိုသင်သေချာစွာနားလည်လိမ့်မည်။ ဤအရာ၏အားနည်းချက်တစ်ခုမှာအချိန်ကုန်ခြင်းနှင့်သင်ပြန်လဲကျခြင်းကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။
သို့သော်များစွာသောသူတို့သည် SEO ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ပြင်ပမှခွဲဝေယူနိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများရှိသည်။ အသေးစားပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသော်လည်းအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။
သင်၏ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးကဒ်များကိုတောင်ခြေရာခံရန်ပရိုဂရမ်အသစ်တစ်ခုကိုသင်လိုချင်ပါက၎င်းသည်သင်အတွက်လည်းသင်တန်းမတက်တော့မည်မဟုတ်လော။ သင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် Semalt မှာကျွမ်းကျင်သူများသူတို့သည်စောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အထူးပြုပြီးသင်ကိုယ်တိုင်တွက်ထုတ်ရန်လိုသည်ထက်ကုန်ကျစရိတ်များသည် ပို၍ နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင့်မှာသံသယရှိနေသေးလျှင်၊ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကသင်ထောက်ခံသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဂူဂဲလ်၏ algorithm သည်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပြီးကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ရန်သင်တန်းမရှိပါ။ သငျသညျ SEO စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဒီတုံ့ပြန်ရန်သင်ယူကြသည်။ SEO ကျွမ်းကျင်သူများ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်ရှာဖွေရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေခြင်းနှင့်နေ့စဉ်အလုပ်များနေခြင်းဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှအကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များသည်လျင်မြန်စွာဟောင်းနွမ်းနေပြီးအလုပ်မလုပ်ရ၊ SEO နှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသောစွန့် ဦး တီထွင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ ဤအရာများကိုနားလည်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်ခက်ခဲသည်။
သင်ကကုမ္ပဏီတစ်ခု၏လုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသင်ဘာလုပ်သလဲ သငျသညျ, ဥပမာ, ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်အထူးကုဖြစ်ကြသည်။ SEO ဆိုသည်မှာအထူးကုလည်းတစ်ခုခုမှာကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ အမည်ဖြင့် Google တွင်သင်၏ရှာဖွေနိုင်မှုကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်း။ ပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုရှာချင်ပါသလား။ ထိုအခါသင်သည်ဤအလုပ်အကိုင်အတွက်အထူးကုဆရာဝန်မဟုတ်ဘဲပန်းချီဆရာကိုရွေးချယ်ပါ။
SEO အထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ပစ်မှတ်အုပ်စုကို ပို၍ ပင်သိကျွမ်းလာလိမ့်မည်။ အထူးကုသို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံရှိအေဂျင်စီ သော့ချက်စာလုံးသုတေသနနှင့်ပြိုင်ဘက်သုတေသနအမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်သွားမည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးကို ပို၍ ပင်သိကျွမ်းလာလိမ့်မည်။ သင်၏ဖောက်သည်များသည်မည်သည့်အရာကိုရှာဖွေနေသည်ကိုသင်သိပြီးသင်၏ပစ်မှတ်ထားသောအုပ်စုနှင့်စီးပွားရေးအကြောင်းကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်လာသည်။
Google ၏အကောင်းဆုံးစာမျက်နှာမှာအနည်းဆုံးသီအိုရီအရအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်မူ၎င်းသည်မကြာခဏကွဲပြားခြားနားပြီး၎င်းသည် Google ၏ algorithm ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်စက်ရုပ်များကလေ့လာတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက်မှုလုပ်ဆောင်တယ်။ စာမျက်နှာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေကိုကြည့်သည်။ ၎င်းကိုအချက်ပေါင်းတစ်ရာကျော်တွင်အကဲဖြတ်ပြီးအချက်တစ်ခုစီသည်၎င်း၏တန်ဖိုးရှိသည်။ အချို့အချက်များသည်အခြားသူများထက် ပို၍ ရေတွက်သည်။ သို့သော်သင်၏စာမျက်နှာသည်အရည်အသွေးနှင့်ဆီလျော်မှုရှိကြောင်းဂူးဂဲလ်သိအောင်မည်သို့အာမခံသနည်း။ သငျသညျအခွင့်အာဏာဖြစ်လာသဖြင့်ထိုအရ။
သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်အဆင့်တိုင်း၌သင့်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်ကိုအစေခံသင့်သည်။ ပြီးတော့ဒိုမိန်းအဆင့်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်အဆင့်နဲ့စာမျက်နှာအဆင့်ကနေသွားတယ်။ သတင်းအချက်အလက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလက်လှမ်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းဖြစ်ရမည်။ Google ကတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လေလေ၊ စာမျက်နှာအဆင့်မှာသင်ပိုရလေလေ။
အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း SEO တွင်အမျိုးမျိုးသောအရာများပါဝင်သည်၊ ဥပမာ - copywriting, website optimization, converting optimization, online marketing, link building နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အခွင့်အာဏာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာရေရှည်ပြissueနာပါ။ သင့်ရဲ့စာမျက်နှာများကိုအကြောင်းအရာနှင့်ရည်ညွှန်းရရန်ဆက်ဆက်။ သင်၏စာမျက်နှာကိုလာရောက်လည်ပတ်သူတစ် ဦး လျှင်လာရောက်သူ
SEO ဆိုသည်မှာအလွန်ကျယ်ပြန့်သောနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုထင်ရှားနေနိုင်သည်။ ဂူဂဲလ်၏ရာထူးများသို့လူအားလုံးကနေရာယူထားသည့်အရာများစွာနှင့်၎င်းသည်တူညီသောအချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ရာနှင့်ချီသောအချက်များအနက်အချို့သည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအချိန်ကုန်ဆုံးလည်းဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်လိုအပ်ချက်ကိုစသုတေသနလုပ်ရန်သင်၏ဖောက်သည်သို့မဟုတ်ရှာဖွေသူသည်မည်သည့်အရာကိုရှာဖွေနေသနည်း။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ visit ည့်သည်၏တောင်းဆိုချက်ကိုတိကျစွာတုန့်ပြန်သောစာမျက်နှာများအတွက်စာသားများကိုရေးလိမ့်မည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုကိုသင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုသိရှိခြင်းသည်အဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းမည်နည်း။
SEO ကိုစတင်ခြင်းသည်သော့ချက်စကားလုံးသုတေသနနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ SEO ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အချိန်များစွာကြာမြင့်စွာအချိန်ယူရခြင်းဖြစ်ပြီးစျေးကွက်သမားကောင်းတစ်ယောက်သည်ယူဆချက်များမှမည်သည့်အခါမှစတင်မည်မဟုတ်။ သငျသညျ optimization သို့သွင်းထားသောအလုပ်ကိုလည်းတန်ဖိုးရှိဖြစ်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်မှားယွင်းတဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေကိုအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်ရှက်စရာကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ဒါဟာအစပြုသူရဲ့အမှားပဲ။ လူကြိုက်အများဆုံးသော့ချက်စာလုံးကိုလည်းမကြာခဏရွေးချယ်လေ့ရှိသည်၊ သို့သော်ရှာဖွေမှုအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုလည်းများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်နံပါတ်တစ်နေရာတွင်ကျယ်ပြန့်သောသော့ချက်စကားလုံးများဖြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်လည်းခက်ခဲသည်။ သေးသေးလေးလုပ်ပါ။ သော့ချက်စာလုံးသုတေသနတွင်သင်မည်သည့်ဝေါဟာရများကိုရှာဖွေသည်၊ မည်သည့်အကြိမ်တွင်သူတို့ထပ်မံရှာမည်၊ ရှာဖွေသူမည်သည့်နောက်ခံမေးခွန်းကိုဖော်ပြရန်ကြိုးစားသည်။ သုတေသနပြုစဉ်အတွင်းသင်သည်အောက်ပါတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည် -
ရှာဖွေသူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့သည်ဤသော့ချက်စာလုံးကိုရှာဖွေနေကြတယ်၊ သူတို့ဘာကိုရှာဖွေရန်မျှော်လင့်ကြသနည်း။
ရှာဖွေမှုကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သလဲ။ the ည့်သည်သည်မည်သည့်စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုသင့်သနည်း။ ပြိုင်ဘက်၌ဘာရှိသလဲ၊ သူတို့ပျောက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်ဘာထပ်ထည့်နိုင်သနည်း။ ထိပ်တန်းရာထူးရရှိရန်မည်သည့်အရာကအရေးကြီးသည်ကိုကြည့်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ သုံးစွဲသူဖော်ရွေမှု၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်စီးဆင်းမှုနှင့်ဒီဇိုင်းစသည့်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းအကြောင်းအရာသည်ဘုရင်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် Google ၏ algorithm တွင် ပို၍ မှန်ကန်လာသည်။ ဂူဂဲလ်မှရှာဖွေသူများတွင်တိကျသောမေးခွန်း၊ စာမျက်နှာကိုသင့်တော်သောစာမျက်နှာတစ်ခုဖြင့်ရှာဖွေသူ၏လိုအပ်ချက်များကိုသင်ဖြည့်ဆည်းပေးပါလိမ့်မည်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တာနဲ့သင်စာကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တဲ့၊ နားလည်လွယ်တဲ့၊ စာဖတ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့စာသားတစ်ချောင်းကိုရေးပြီးလုပ်ပါ။ သူတို့ကဒီ SEO ကော်ပီရေးခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။
SEO copywriting ဆိုသည်မှာရှာဖွေသူအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလွယ်ကူစွာဖတ်နိုင်သောအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးသည့်ရေးသားနည်းဖြစ်သည်။ ဒီအခက်ခဲဆုံးပါ! တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်သည် Google ၏ algorithm ကိုနှင့်ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။
သင် copywriting နှင့်စတင်သောအခါ, သင်နှစ်ခုအကြားကောင်းမွန်သောခွဲခြားရပေမည်။ အကြောင်းအရာကိုအရေးအကြီးဆုံးသော့ချက်သော့ချက်ဖြင့်ထည့်သွင်းသောသော့ချက်စာလုံးများကိုမရေးလိုပါ။
အရည်အသွေးအကြောင်းအရာအနိုင်ရရှိ! စာသားကရှင်းတယ်၊ စာဖတ်သူတွေကိုဆက်နေစေတယ်။ သင်၏စာမျက်နှာပေါ်တွင် visitors ည့်သည်များသည်မည်မျှကြာသည်ကို Google ကမြင်ပြီးဖတ်ပြီးသောအကြောင်းအရာသည်အခွင့်အာဏာပေးသည်။ သို့သော်အရည်အသွေးရှိသောပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများတွင်ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများလည်းပါ ၀ င်သည်။
အာဏာပိုင်နှင့် link ကိုတည်ဆောက်ခြင်း
ရှာဖွေရေးယန္တရားအတွက်မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၌အခွင့်အာဏာရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်အရေးကြီးသည်။ သူတို့သည်စာသားကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးသင်၏စာမျက်နှာတွင် visitors ည့်သည်များမည်မျှကြာကြာနေနိုင်သည်ကိုမြင်နိုင်သည်၊ သို့သော်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမှမသိရ။ Google သည်၎င်းကိုစာမျက်နှာ၏အခွင့်အာဏာဖြင့်တိုင်းတာသည်၊ ၎င်းသည် algorithm ၏အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အာဏာကို Domain Authority နှင့် Page Authority မှတိုင်းတာသည်။ ရမှတ်နှစ်ခုလုံးသည်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ MOZ မှဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာကိုကိုးကားခြင်းအားဖြင့်အာဏာကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆုံးဖြတ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင် (အရည်အသွေး) ရည်ညွှန်းချက်များစွာရှိပါကထိုအရာသည်အလွန်ကောင်းမွန်ရမည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်၏စာမျက်နှာကိုနယ်ပယ်အချို့တွင် 'အခွင့်အာဏာ' ဟုလျင်မြန်စွာရည်ညွှန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအကောင်းတကာ့စတင်တည်ဆောက်ခြင်းသည် visitors ည့်သည်အနည်းငယ်သာဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် Google သည် for ည့်သည်များသည်သင်၏မည်မျှအရေးပါသည်ကိုတိုင်းတာရန်အရေးကြီးသည်။ သင် visitors ည့်သည်များများများလေလေ၊ သင်နှင့်သက်ဆိုင်လေလေဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, တိုင်းတာခြင်းကိုလည်းရည်ညွှန်းအပေါ်အခြေခံပြီးခေါ်ဆောင်သွားသည်နှင့်ဤသည်ကိုသင် Google နှင့်အတူကူညီနိုင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အစအ ဦး ၌ link များကိုဖြန့်ဝေရန်နှင့်လူများအားသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ခေါ်ဆောင်ရန်အဆင့်များကိုလည်းသင်ပြောရပါလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို link building ဟုခေါ်သည်။
သင်သည်သင်၏ backlinks အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်
၎င်းသည်ပြင်းထန်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သငျသညျသဘာဝကျအရည်အသွေး backlinks ချင်သောကြောင့်သင်မျှမျှတတသုတေသနလုပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ထို့နောက်စာမျက်နှာများကိုရေးရန်သို့မဟုတ်ခေါ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့လင့်ခ်တစ်ခုတင်ရန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုစာရေးရလိမ့်မည်။ မင်းဘာပြောချင်တယ်၊ ဘာပြန်လာလဲဆိုတာမင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
၎င်းသည်သင်တုန့်ပြန် backlink များတင်နေသည်ဟုဂူးဂဲလ်ကိုသတိမပြုမိစေရန်သေချာစေရန်အထူးပြုလုပ်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အကြောင်းအရာကွဲပြားခြားနားကြောင်းသေချာပါစေ။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၊ တိကျတဲ့သော့ချက်စာလုံးနှင့်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အကြားဆက်နွယ်မှုကိုစဉ်းစားပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်ဟန်ချက်ညီနေဆဲဖြစ်သည်။
ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် link များအပြင်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုနှင့်တိုးတက်မှုတို့သည်လည်းအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ စာသားအပြင်သင်ခေါင်းစဉ်တွင်ရွေးချယ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများ၊ Meta ဖော်ပြချက်၊ URL၊ ခေါင်းစဉ်များနှင့်ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်တင်ထားသည့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုလည်းသင်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
စာမျက်နှာ၏တင်ချိန်၊ လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း၊ ကျိုးပဲ့နေသောလင့်ခ်များနှင့်ရည်ညွှန်းကိုးနိုင်မှုတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
နည်းပညာအရကောင်းမွန်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိခြင်းသည်ကောင်းစွာရှာဖွေရန်အရေးကြီးသောအခြေခံဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂူဂဲလ်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှအကဲဖြတ်သည်။ ထို့အပြင်ကုဒ်ကိုတတ်နိုင်သမျှကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာပို့ဆောင်ရန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည်တင်ချိန်ကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ HTML tag များအတွင်းမှ CSS ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားသင့်သည်။